Home Wararka Sababta uu Farmaajo ugu diray Rooble magaalada Dhuusomareeb
[OGOW] Sababta uu Farmaajo ugu diray Rooble magaalada Dhuusomareeb
Saacado kaddib markii la ogaaday in MW Jubbaland Axmed Maxamed Islaan uu ku wajahan yahay magaalada Garoowe ayaa Fahad iyo Farmaajo waxay u yeereen Rooble kuna qanciyeen in uu tago magaalada Dhuusomareeb.
Ma jirto wax ujeeda ah ee Rooble u tagay Dhuusomareeb oo aan ahayn in lagu amray in uu tago. Ujeedka Farmaajo iyo Fahad ayaa ah.
In laga dhigo dagaalka siyaasadeed ee u dhexeeya Deni, Madoobe iyo Farmaajo mid qabiil oo aay isku hayaan Hawiye iyo Daarood.
Qoor Qoor oo horey ugu eedeeyay in Suufiyada aay soo direen Puntland ayaa waxaa safarka Rooble uu ka dhigayaa mid uu la qabo.
In uu bilowdo isku dhac hor leh oo keeni kara in Doorashada dib ugu sii dhacdo maadaama RW Rooble oo loo arkayay dhexdhexaad uu hadda si toos ah uga amar qaadanayo Fahad iyo Farmaajo.
In laga hortago qorshaha Deni iyo Madoobe ee ah in si talan taali ah aay u dhacdo Doorashada oo hal mar lawada bilaabo dhowr maalmoodna lagu dhameeyo Doorashada, hallka Farmaajo uu rabo in bishiiba 10 ilaa 15 xildhibaan la doorto si aay Doorashada u dheeraato.
Waxaa ayaan darro ah in awaamiirta DG Galmudug, Hirshabeelle iyo Koofur Galbeed aay ku shaqeeyneyaan looga soo dhiibo Villa Somalia, iyadoo Midowga Mucaaradka ahaa aan meelna lagu sheegin, kuna soo dhammaatay doodooda iyo dagaalkooda in aay dacwado u gudbiyaan Diblomaasiyiinta Xalane, halka Farmaajo uu qorsheynayo in Doorashada Madaxweynaha aay dhacdo Bisha Juun ama Luulyo ee sanadka 2022.